xawaaraha sare ee CNC machining 8 - Shiinaha Ningbo Beilun Daqi Hongxiang
xawaaraha sare ee CNC machining
Aluminum caaryada shubay dhinta
Baatrool taxane engine
qaybaha korontada taxane
taxane iftiinka LED
qayb ka mid caag ah duro
R & D kooxda
xawaaraha sare ee CNC machining 8
ee tayada sare ee kartoo aluminium dhiman ridaya caaryada / tooling / dhiman & qayb
Iyo meesha Asal ahaan: Zhejiang, Shiinaha (Dhul)
Number Model: HX10091die caaryada ku ridaya
Qaabeynta Mode: dhinta ridaya
Waxyaabaha Product: Aluminum
Product: Vehicle caaryada
Isaha farsamada: dhiman shubay
Baako: sanduuqa Wooden
wax caaryada: DIEVAR, SKD61, H13,8407, iwm.
saldhig caaryada: Standard C45
nolosha caaryada: 50000shots in 100000 darbo
Product Name: tayo sare leh caaryada shubay dhinta aluminium
shahaado: ISO9001: 2008
daaweynta dusha: daaweynta Heat
Ku rid dhinta aluminium kasta caaryada shubay sanduuq alwaax
qaybo model HX10091
farsamada wax taaj oo kale Die ridaya
waxyaabaha ADC12, A380, AlSi12, A356, ZL102, YL104, YL112, YL113,
iyo daawaha badan aluminium kale ayaa dhamaantood la aqbali karo.
aragti Sida sawiro ama baarka
daaweynta dusha Sandblasting, Rinjiyeynta, daahan Powder, Anodize,
galvanized, Chrome dahaadhay, dahaadhay Nikkel, iwm.
Die wasakhahaasi ridaya saabka Single ama Multiple
waxyaabaha H13, DIEVAR, QDN, 8407,2344V, TQ1,2343, SKD61,
45 # steel, iwm.
daaweynta Heat Sii qallafsanaaday, Nitriding
darantahay ingeega, HRC50 ~ 55
feature caaryada Design Advanced, qaab-dhismeedka Hargabka, sax High,
qalabka Quality, Meyeydaan Long, waqtiga dhalmada Gaaban
qalabka CNC mashiinka xardho caaryada sax, mashiinka la xirrira CNC,
CNC leexdo, EDM, mashiinka goynta toosan, Die tabaabushayso mashiinka (200T),
Die mashiinka ridaya (180T ~ 1250T), Lathe oo daqiijiyey mashiinka;
CMM, qalabka Waxyaabaha, qalab imtixaan engegnaantiinna aawadeed, spectrograph, iwm.
software CAD, UG, Pro / E, JSCAST-V8 ee Japan, FLOW3D.v9.2 of America, iwm
shahaado Quality UKAS & SGS ISO9001: 2008
Advantage Quality Waxa xooga la saaraa samaynta faahfaahsan kasta oo si taxadar leh had iyo jeer
Qiimo Waxaa laga yaabaa in aan ku hooseeya, laakiin waa in ay macquul ah iyo
qiimaha tartan rasmi ah
Delivery Marna ha ka dambayn waqtiga dhalmada ee heshiiska
Adeega 1. Meel kasta iyo mar kasta oo aad su'aal soo diro, had iyo jeer
ka heli jawaabi aan ka badnayn 2 maalmood oo shaqo.
2. Marka dhib lagu jiro processing mashruuca, had iyo jeer
ogaatid dhibaatada iyo ugu horeysay ka xalliso dhinaca macaamiisha,
ka dibna loo ogaado meesha ay masuuliyadda been, xisbiga
ama kooxda macaamiisha.
R & D waayo-aragnimo barwaaqo iyo farsamo yaqaan shubay dhinta
Kooxda United iyo kooxda positive
Maxaa yeelay rumaystaa, soo booqan Shirkadda, baad u rumaysan doontaan in alaabta iyo adeega waa tartan!
Wixii faahfaahin dheeraad ah, soo dhaweyn nala soo xiriir. Ningbo HONGXIANG CO Makiinado Qaab., Ltd rabto in aad ku dhameysan qaar ka mid ah mashaariicda loo shubay dhiman aad la wada dhammaataan.
Damaanad iyo Adeegyada Ka dib-sale waqtiga damaanadda ONE-YEAR for mashiinka oo dhan marka laga reebo of tuubooyinka iyo arrimo aadanaha iwm, 18 bilood laga bilaabo taariikhda marka aad heshay mishiinka ama 12 bilood marka rakibaadda dhammeeyey,
adeegyada la taliye u ah nolosha mashiinka oo dhan, 24 saacadood taageero farsamo by email;
Naga soo wac by 86-0577-65905955 86-13356198899 inta lagu jiro waqtiga shaqada;
UPS-friendly Ingiriisi jilicsan-iib ah, buuga user iyo diri expericed farsamo for installaton & debuggin
1. mashiinka si fiican u la kulmi karaa baahida our?
sida ay requirments aad gaar ah waxaan ku siin doonaa soo jeedinta. mashiinka kasta waxaa kartoo si fiican u daboolo baahiyahaaga.
2. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsiga shirkadda?
Waxaan nahay Warshadda, waxaan qabano line this sanado badan.
3. habka lacag bixinta maxay?
T / T by xisaab bangi our si toos ah, ama u-adeegiddan Ilaah hubaasha ganacsiga alibaba, ama by West Midowga, ama lacag caddaan ah.
4. Sidee aan hubin karnaa in ku saabsan tayada mashiinka ka dib markii aan u saaray amarka?
Ka hor dhalmada, waxaan kuu soo diri doonaa sawirada iyo videos aad u fiirisid tayada, iyo sidoo kale waxaad qabanqaabin kartaa tayada hubinta keligaa ama xiriirada aad ee ururka kormeerka xisbiga saddexaad.
5. Waxaan idinka cabsan ha noo soo diri doonaa mishiinka ka dib markii aan kuu soo dirno lacagta?
Fadlan la soco our liisanka ganacsiga kor ku xusan iyo shahaado. Oo haddii aadan noogu aamini, ka dibna waxaan u isticmaali kartaa adeegga hubsashada alibaba ganacsiga ama lacag bixinta by LC, damaanad lacagtaada.
6. Waa maxay sababta aan u doortaan shirkadaadu?
Waxaan nahay professtional in mashiinada xirxirida sanado badan, oo aanu ku siin fiican-iibinta ka dib
adeegga. Waxaad ballan qaadi jirin khatar ah ee aannu heshiiska.
7.Need dheeraad ah mashiinada faahfaahin ama videos?
Fadlan si toos ah la xiriiri Mr.Jim!
Waxaan sidoo kale ay awoodaan in ay astaysto mashiinada sidii baahida faahfaahsan aad, sida lagu cabayn
xawaaraha, dhererka boorsada, wax soo saarka max sare, iwm Hope in ay iskaashi kula mustaqbalka dhow!
Damaanad iyo Adeegyada Ka dib-sale waqtiga damaanadda ONE-YEAR for mashiinka oo dhan marka laga reebo of tuubooyinka iyo arrimo aadanaha iwm, 18 bilood laga bilaabo taariikhda marka aad heshay mishiinka ama 12 bilood marka rakibaadda dhammeeyey, Adeegyada la taliye u ah nolosha mashiinka oo dhan, 24 saacadood taageero farsamo by email; Naga soo wac by 86-0577-65905955 86-13356198899 inta lagu jiro waqtiga shaqada; UPS-friendly Ingiriisi jilicsan-iib ah, buuga user iyo soo diri farsamo expericed for installaton & debuggin 1. mashiinka si fiican u la kulmi karaa baahida our? Sida ay requirments aad gaar ah waxaan ku siin doonaa soo jeedinta. Mashiinka kasta waxaa kartoo si fiican u daboolo baahiyahaaga. 2. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsiga shirkadda? Waxaan nahay Warshadda, waxaan qabano line this sanado badan. 3. habka lacag bixinta maxay? T / T by xisaab bangi our si toos ah, ama u-adeegiddan Ilaah hubaasha ganacsiga alibaba, ama by West Midowga, ama lacag caddaan ah. 4. Sidee aan hubin karnaa in ku saabsan tayada mashiinka ka dib markii aan u saaray amarka? Ka hor dhalmada, waxaan kuu soo diri doonaa sawirada iyo videos aad u fiirisid tayada, iyo sidoo kale waxaad qabanqaabin kartaa tayada hubinta keligaa ama xiriirada aad ee ururka kormeerka xisbiga saddexaad. 5. Waxaan idinka cabsan ha noo soo diri doonaa mishiinka ka dib markii aan kuu soo dirno lacagta? Fadlan la soco our liisanka ganacsiga kor ku xusan iyo shahaado. Oo haddii aadan noogu aamini, ka dibna waxaan u isticmaali kartaa adeegga hubsashada alibaba ganacsiga ama lacag bixinta by LC, damaanad lacagtaada. 6. Waa maxay sababta aan u doortaan shirkadaadu? Waxaan nahay professtional in xirxiraan mashiinada sanado badan, oo aan bixino adeeg wanaagsan ka dib iibka. Waxaad ballan qaadi jirin khatar ah ee aannu heshiiska. 7.Need dheeraad ah mashiinada faahfaahin ama videos? Fadlan si toos ah la xiriiri Mr.Jim! Waxaan sidoo kale ay awoodaan in ay astaysto mashiinada sidii baahida faahfaahsan aad, sida lagu cabayn xawaaraha, dhererka boorsada, wax soo saarka max sare, iwm Hope in ay iskaashi kula mustaqbalka dhow!
Previous: xawaaraha sare ee CNC machining 7
Next: xawaaraha sare ee CNC machining 9
Die Qaab Casting
Die Casting caaryada
slider digsiga Oil
xawaaraha sare ee CNC machining 4
mootooyinka Polaris American loox ka hoosayso
kooxda go'an kiiska kumbyuutarradeedu SUZUKL tagay
CX isgaarsiinta part 2
xawaaraha sare ee CNC machining 6
Cinwaanka: No.98 Qinglin Industry Zone, Daqi, Beilun, Ningbo, Shiinaha. PC: 315827